Xiaomi Mi Smartband 4: famaritana, vidiny ary fandefasana | Androidsis
Rehefa afaka herinandro maromaro misy famoahana isan-karazany, tonga ny andro. Xiaomi dia namela antsika ny taranaka fahefatra amin'ny bracelet an'ny hetsika, izay miaraka amin'ny fanovana maro, ary koa amin'ny anarany. Amin'ity taranaka vaovao ity dia nomena anarana hoe Xiaomi Mi Smartband 4. Taranaka vaovao amin'ny fehin-tànana mahomby amin'ny marika sinoa, izay miaraka amina endrika vaovao, ankoatry ny fanatsarana ny masontsivana.
Ity Xiaomi Mi Smartband 4 ity dia aseho amin'ny ny fehin-tànana matanjaka indrindra navelan'ny marika sinoa antsika. Ny sasany amin'ireo famoahana hatreto dia momba ny fehin-tànana no voamarina. Volavola vaovao, famaritana tsara kokoa, fa mitazona ny vidiny ambany toy ny teo aloha ihany.
Ny fanovana endrika dia iray amin'ireo lafiny manandanja indrindra ao. Nisafidy efijery lehibe kokoa izy amin'ity tranga ity, ankoatry ny maha-tactile, amin'ny fampiasana tsara kokoa ny bracelet. Ho fanampin'izay, izy no taranaka voalohany amin'ny marika ahitantsika efijery miloko. Ireo entana izay tena manandanja.
1 Famaritana Xiaomi Mi Smartband 4
Famaritana Xiaomi Mi Smartband 4
Araka ny efa naely nandritra ny herinandro maro, Ny Xiaomi Mi Smartband 4 dia mampiasa tontonana AMOLED 0,95-inch ny habeny. Izy io no tontonana lehibe indrindra ampiasaina amin'ny fehin-tànana marika hatreto. Ankoatr'izay dia takelaka misy loko izy ity, izay amin'ity tranga ity dia manana vahaolana 240 × 120 teboka, araka ny nohamafisin'ny orinasa. Mampiasa teknolojia 2.5D amin'ity tontonana ity izy.
Ho fahatsiarovana MP MP 16 no nampiasaina. Toy ny tamin'ny taon-dasa, mahita kinova roa amin'ny brasele isika, ny iray miaraka amin'ny NFC ary ny iray hafa tsy misy io fiasa io. Samy miaraka amin'ny Bluetooth 5.0 ho fifandraisana, mifanaraka amin'ny telefaona Android amin'ny Android 4.4 ary miaraka amin'ny telefaona iOS avy amin'ny iOS 9. Miankina amin'ny kinova, manana habe sy bateria hafa izahay.
Ny Xiaomi Mi Smartband 4 miaraka amin'ny NFC dia manana bateria 125 mAh. Raha ny maodely tsy misy NFC dia manana 135 mAh amin'ny tranga misy azy. Ankoatr'izay, ny brasele miaraka amin'ny NFC dia somary mavesatra kokoa, na dia tsy azo tsinontsinoavina aza ny fahasamihafana amin'ity tranga ity ary samy milanja 22 grama fotsiny, araka ny fanamafisan'ny orinasa tamin'ny fampisehoana. Ny tadin'ny bracelet dia azo ovaina amin'ny halavany, avy amin'ny 155 ka hatramin'ny 216 mm amin'ity tranga ity.
Toy ny mahazatra amin'ny taranaka hafa, manana ny asany fanaraha-maso ny asa ara-batana mahazatra. Manomboka amin'ny dingana fandraketana, manao fanatanjahan-tena, manisa kaloria, mandrefy ny tahan'ny fo ao aminy ary manara-maso ny torimaso. Misy endri-javatra vaovao roa ampidirina, toy ny fampandrenesana raha avo loatra ny tahan'ny fo. Etsy ankilany, ny kinova NFC an'ny fehin-tànana dia mifanaraka amin'ny baiko am-peo, sambany amin'ity sokajy ity.
Ho fanampin'izay, ho afaka ny mpampiasa ampanjifaina ity dial ity Xiaomi Mi Smartband 4. Izy ireo koa dia manana ny asan'ny fanoherana ny fanitrihana hatramin'ny 5 ATM. Manana andraikitra toy ny ID mpiantso na fampisehoana hafatra voaray ao koa izahay. Izany rehetra izany dia natao ho an'ny fampiasana fehin-tànana tsotra sy feno kokoa.
Ny fampisehoana ny fehin-tànana dia efa natao tany Chine, izay hamidy amin'ny 14 Jona. Ka ny mpampiasa dia tsy maintsy miandry fotoana fohy vao hividy azy. Amin'ny tranga any Espana, Antenaina fa rahampitso no hanolorana azy amin'ny fomba ofisialy, miaraka amin'ny Xiaomi Mi 9T vaovao. Nandatsaka izany tamin'ny tambajotran-tserasera ny orinasa. Ka azo inoana fa afaka andro vitsivitsy dia hamidy any Espana koa ny Xiaomi Mi Smartband 4.
Amin'izao fotoana izao dia manana ny vidin'ny fehin-tànana any Chine izahay, izay misy ny kinova roa. Tsy mbola fantatsika raha hanomboka any Eropa ilay kinova miaraka amin'ny NFC, hatramin'ny taon-dasa dia tsy navoaka. Rahampitso dia hamela fisalasalana isika. Ny vidin'ny Xiaomi Mi Smartband 4 any Shina dia:
Ny kinova tsy misy NFC dia sarany 169 yuan (21 euro hanovana)
Ny maodely miaraka amin'ny NFC dia mitentina 199 yuan (25 € hanovana)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Ny Xiaomi Mi Smartband 4 dia ofisialy izao: Fantaro ny antsipiriany rehetra
Tonga ao amin'ny Waze ny mpanampy Google
Google Maps dia hampandre antsika raha te-hihodina ny mpamily fiarakaretsaka